Njem njem njem - Ndụmọdụ maka ịhazi njem kacha mma | Akụkọ njem
Susana godoy | | Cruceros
Ọ bụrụ na ị na -eche maka njem njem ụgbọ mmiri, mgbe ahụ ọ bụ oge dị mma ịme atụmatụ zuru oke na ya. Anyị enweghị ike ichefu ihe ọ bụla! Mana ọ bụghị naanị ikwu maka ibu kamakwa maka ezigbo nzukọ ka ejikọ ihe niile nke ọma na nke a na -amalite n'isi ụtụtụ karịa ka anyị chere.
Anyị maara na ọ ga -abụ oge pụrụ iche, ụfọdụ ụbọchị agaghị echefu echefu, na iji pụọ na ihe ndị a niile, ọ bụ ihe amamihe ịgbaso usoro. Ịhazi njem njem njem bụ ihe kacha atọ ụtọ Ebe ọ bụ na anyị achọghị ka ị hapụ ihe niile na nkeji ikpeazụ, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị chọpụta ihe ịtụnanya anyị nwere maka gị.
1 Họrọ otu n'ime ebe ndị ama ama
2 Echerela ruo oge ikpeazụ ka ịdebe ndoputa ahụ
3 Kedu ụlọ m ga -ahọrọ
4 Kedu ee na ihe m na -ekwesịghị iburu n'ime akpa akwa
Họrọ otu n'ime ebe ndị ama ama
Ikekwe ị bu n'obi ebe ị na -aga, n'ihi na ọ bụ eziokwu na mgbe anyị na -atụle njem njem ọ nwere ike ịdị otu a. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga -eburu n'uche ndị a na -achọsi ike, ka ị ghara ịpụ ebe gị. Ụgbọ mmiri Mediterranean bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma. Maka gịnị? Ọ dị mma, n'ihi na ọ na -enye anyị karịa ọdịdị ala agaghị echefu echefu. Ndị Greece njem ụgbọ mmiri na -akpọ gị oku ka ị chọpụta agwaetiti niile juputara na akụkọ ifo na ihe ncheta nke ị ga -ahụrịrị n'onwe gị, opekata mpe otu oge na ndụ gị.
N'otu aka ahụ Athens, site na Crete, Mykonos ma ọ bụ Santorini. Naanị site n'ịkpọ ha aha, anyị maara na anyị ga -enwe njikọta ọdịbendị na osimiri kachasị iche n'ụwa. N'aka nke ọzọ, njem ụgbọ mmiri site na Caribbean bụ nhọrọ ọzọ achọrọ na -enweghị eleghara ugwu Europe anya nke na -enye anyị ohere ịnụ ụtọ Norway, Saint Petersburg ruo Stockholm ma ọ bụ Copenhagen. Ije ije site na fjords ma ọ bụ isi obodo Baltic zuru oke maka njem ụgbọ mmiri anyị!
Echerela ruo oge ikpeazụ ka ịdebe ndoputa ahụ
Ọ bụghị njem anyị nwere ike ime n'ime obere oge, ihe dị iche. Ihe kacha mma bụ ịgbalị ịhazi ya tupu oge eruo ma ọ bụrụ na ọ bụ nrọ anyị, anyị agaghị egbu oge ọzọ. Ọ bụ ya mere na anyị enweghị ike ịnye gị oge dị mma mana nke a kapịrị ọnụ: Otu afọ tupu oge eruo ka dabara adaba, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ime ya afọ abụọ gara aga. Ọ bụrụ na ọ dị oke oke, cheta nke ahụ N'etiti uru dị n'iwepụta ndoputa n'oge bụ inwe ike ịhọrọ ụdị njem ụgbọ mmiri yana usoro njem ha, nnweta ụbọchị ma ọ bụ ụlọ ndị kacha ibu., n'ihi na ha na -abụkarị ndị echekwara na mbụ. Na -echefughị ​​na ị nwekwara ike irite uru n'ọkwa nkwalite ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịmee ndoputa gị ozugbo enwere ike. Ndị ụgbọ mmiri 2022 dị ugbu a maka gị!
Kedu ụlọ m ga -ahọrọ
Ọ bụ ajụjụ ọzọ a na -achọkarị na karịa ihe niile, a ga -ekwurịrị na ahịrị ụgbọ mmiri ebe ị na -aga njem nwere ike inye gị ndụmọdụ mgbe niile dabere n'ụdị ụgbọ mmiri. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga -agwa gị nke ahụ Ọ bụrụ na ị banyebeghị n'ụgbọ mmiri, ọ kacha mma ịhọrọ ụlọ n'ime akụkụ etiti na okpuru ala. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ otu n'ime mpaghara ebe a na -anaghị ahụkarị mmegharị ụgbọ mmiri nke a ga -egbochi anyị inwe isi ọwụwa. A na -atụ aro ụlọ dị na mpaghara ala mgbe ị ga -anọ naanị n'ime ya ka ị hie ụra ma zuru ezu. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na i chere na ị nwere ike itinyekwu oge n'ime ya na -ezu ike, gbalịa zere ya na mpaghara ebe ọtụtụ mmadụ na -ezukọ.
Kedu ee na ihe m na -ekwesịghị iburu n'ime akpa akwa
Nkwakọba bụ akụkụ ọzọ nke njem ọ bụla kwesịrị nnu ya. Yabụ, ọ nweghị ihe dị ka ịkụ nzọ na ịhazi ya nke ọma. Anyị na -echefu ahịrịokwu a nke 'Ọ bụrụ na ọ dị' n'ihi na n'ikpeazụ anyị na -ahụ onwe anyị na akpa akwa karịrị kilogram enyere. Yabụ, cheta na ị ga -eyi uwe dị mma maka ụbọchị ahụ na akpụkpọ ụkwụ na -adịghị amị amị. Ma ịnọ n'ụgbọ mmiri na ịga njem mmụta, n'agbanyeghị na ebe a anyị ga -agbanwe ụdị akpụkpọ ụkwụ.
Maka mgbede, ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ anyị ga -ahụ nri abalị ntakịrị. Yabụ ị nwere ike itinye uwe nke bụkwa. A ga -achọkwa akwa egwuregwu na akwa ịsa ahụ. Agbanyeghị na ị ga -achọpụta ma ị nwere ya n'ụgbọ, ị nwere ike were gel ma ọ bụ ncha ntutu were obere ite. Mana ee, ewetala ihe nhicha ntutu ma ọ bụ igwe maka ntutu ma ọ bụ akwa gị. Maka na ọ bụ ihe a na -anaghị anabatakarị. Yabụ, lekwasị anya nke ọma na uwe, ngwa na n'ezie, nsacha eze ma ọ bụ mkpanaka ị na -echefughị. N'ezie, ị ga -etinyerịrị ma paspọtụ na kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ị dịla njikere ịkwọ ụgbọ mmiri nke ga -abụ ezumike kacha mma na ndụ gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Cruceros » Ndụmọdụ maka ịhazi njem njem ụgbọ mmiri